Team KR News, Author at INRA ONLINE MEDIA
Author: Team KR News
May 18, 2019 Team KR News
आर्ट अफ गिभिंग काे छाैटाे वार्षिकउत्सब सम्पन्न
आज मिति २०७६ जेष्ठ ३ गते सप्तरीकाे कंचनपुर नगरपािलका स्थित श्रि रास्ट्रिय पराथिमक बिधालय भाेडहा, बदगामा काे प्रान्गंमा शुक्रबार आर्ट ऑफ़ गिभिंग नेपाल भिभिन्न कार्यक्रम गरि छाैठाे वार्षिकउतसव मनाएकाे छ ।
May 8, 2019 Team KR News
कपाल काटेरै मनग्गे आम्दानी गर्ने लाफा
भूमिका पाख्रिन, लेटाङ
मेहनत र लगनशील भएर काम गर्न हो भने विदेशिनु पर्दैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हुन् शेरबहादुर माकिम मगर । वि.सं. २०३४ सालमा पिता बलबहादुर माकिम र माता माया माकिमको कोखबाट मोरङको लेटाङमा जन्मिएका शेर बहादुर माकिम मगर हाल आफ्नै प…
April 27, 2019 Team KR News
सिरहा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर पक्राउ
पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर राजकुमार गोइतलाई शनिबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सदरमुकामस्थित सरकारी निवासबाट उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ ।
सिरहाका प्रहरी उपरीक्षक ज…
सख्डा मन्दिरको पोखरीमा नुहाउने क्रममा बालकको मृत्यु
राजबिराज । सख्डा मन्दिरको पोखरीमा नुहाउने क्रममा बालकको मृत्यु
मुलुककै सुप्रसुद्धी शाक्ती पिठ छिन्नम्स्ता मन्दिरमा रहेको पोखरीमा नुहाउने क्रममा एक बालकको मृत्यु भएको छ ।
नुहाउने क्रममा सोही ठाउँका ६ वर्षीया शम्भु मण्डलको सप्तरीको प्रसिद्ध छिन्नम…
February 24, 2019 Team KR News
कुरा सन् २००७ को हो, अम्बानी दाजुभाइ अर्थात् मुकेश र अनिल छुट्टिएको दुई वर्ष पुगेको थियो ।त्यो वर्ष फोर्ब्सको धनाढ्यको सूचीमा यी दाजुभाइ, मुकेश र अनिलको स्थान निकै माथि थियो । दाइ मुकेश, अनिलभन्दा थोरै धनी थिए । त्यो वर्षको सूची अनुसार अनिल अम्बानी ४…
संयोगले पत्र आएका वेला उनका …
कटहरिया नगरपालिकाले भोलि नगरको सबै वडा कार्यालय र विद्यालयमा विदा दिएको छ । कारण छ-हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका मेयर शियाराम कुशवाहा सफाई । जेलबा…
December 20, 2018 Team KR News
यी हुन् काठमाडौंका पाकेटमार ! ५० प्रहरी खटाउँदा ७७ पक्राउ
४ पुस, काठमाडौं । कैलालीका सुरेन्द्रबहादुर सिंह नातिको उपचारका लागि पैसा बोकेर २५ मंसिरमा काठमाडौं आए । नयाँ बसपार्कमा ओर्लिएपछि अन्तरराष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालसम्म जान कान्तिपुर यातायातमा चढे ।
‘गाडी एकदम भिड थियो’, उनले स्मरण गरे, ‘हतार थियो, ज…
December 16, 2018 Team KR News
कञ्चनपुर, पुष १ । कृष्णपुर नगरपालिका– ३ आमघाटका एकै घरका दुई बालकको चाउमिन खाँदा ज्यान गएकाे छ । चाउमिन खाएर ज्यान जानेमा १२ वर्षीय धनबहादुर सुनार र आठ वर्षीय टेक सुनार रहेका छन् । दुवै जना सदोहर दाजुभाइ हुन् ।
शनिबार बेलौरीमा रहे…